Mujuru’s ZimPF not interested in working with war veterans aligned to Mutsvangwa – Pindula News
Politics	January 4, 2017
Mujuru’s ZimPF not interested in working with war veterans aligned to Mutsvangwa
The Joice Mujuru lead Zimbabwe People First (ZimPF) has indicated that she is unwilling to form a coalition war veterans that are aligned to Christopher Mutsvangwa. Mutsvangwa and his fellow colleagues have been very vocal about backing Vice President Mnangagwa to succeed Robert Mugabe.
ZimPF spokesperson Jealousy Mawarire said:
Mutsvangwa and his small group of war veterans have been very clear that they are bidding for a Mnangagwa presidency. They have never been part of us and, for all we know, they are fighting for a return to Zanu PF
We are, however, very clear that the coalition we seek should remove Zanu PF from power, not entrench its rule through Mnangagwa.
We have the greater chunk of former freedom fighters in our party led by leading commanders in the struggle against colonialism. Mutsvangwa and his proxies like Victor Matemadanda (war veterans’ secretary-general) and Douglas Mahiya (war veterans’ spokesperson) are very junior people in this regard
Tagged: Christopher Mutsvangwa Jealousy Mawarire Joice Mujuru Zimbabwe People First (ZimPF)
« Previous ZANU-PF Mashonaland West Province recommends Chanetsa to be declared a national hero
Next » Magaya says freedom of worship is under threat from social media and false prophets